पानी प्रदूषितका कारण जलचर प्राणी लोप हुँदै - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
पानी प्रदूषितका कारण जलचर प्राणी लोप हुँदै
- माधव ढकाल
पछिल्लो समय अव्यवस्थित विकास निर्माण, बसाइसराइ, औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, सडक जस्ता पूर्वाधार विकासको कारण दिनानुदिन जल प्रदूषणका कारण प्रकृति नदी नालामा जलचर प्राणी लोप हुँदै गएको छ ।
काठमाडौँकै मुटु मुख्य नदीहरूमा जीवन पटक्कै नपाइनुले आजभन्दा भोलिको काठमाडौँ सहर थप जटिल हुनेछ । काठमाडौँमा भएको अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण, सिमेन्टका ठुला खम्बाहरूझै‌ ठुला भवनहरू देखा परेका छन् । तर, ती भवनमा रहने मानिसहरूबाट निष्कासन भएको प्रदूषणको कारण काठमाडौँको स्रोत भूमिको पानी प्रदूषित बनेको छ । नदीहरूमा अक्सिजन शून्य प्रायः छ । बाग्मती, विष्णुमती आदि उपत्यकाका धेरै सहायक नदीहरूमा अब जीवन छैन । बाग्मतीको कटुवाल दहदेखि पशुपतिको आर्यघाटसम्म १२.५ कि.मि. क्षेत्रमा कुनै जलचर भेटिँदैनन् ।
हिउँदमा मात्र होइन, वर्षा याममा पनि यी नदीहरूमा अब पानी होइन ढल मात्र बग्छन् । पशुपतिदेखि सुन्दरी जलसम्मको मुहान क्षेत्र पनि अव तीव्र रूपमा विषाक्त हुने क्रम जारी छ । एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वि.सं. २०४७ सालसम्म कटुवाल दहदेखि थापाथली पुलसम्म मात्र जलचर थिएनन् । ३० वर्षपछि अब पुरै नदीमा चरचर छैनन् । अक्सिजन नहुँदा पनि बाँच्ने काइरोनोमिड र ओलिजोकेड जीव मात्र यहाँ बाँकी रहेको छ, जुन गँड्यौला प्रजातिमा पर्छ । नदीमा पुरै ढल बग्ने र मुहानको पानी वितरणमा प्रयोग भएकाले अव उपत्यकाको मुख्य नदीहरूमा जीवन्तता नपाइने भएको छ । सडक, सिमेन्ट, ढल आदिका कारण आकाशबाट परेको पानी पनि जमिनले सोस्न सक्ने अवस्था नहुँदा जमिनमुनिको पानी पनि अब विषाक्त बनिसकेको छ । जलचर, वनस्पति र अक्सिजन नपाइने पानी प्रयोग योग्य हुँदैन ।
पछिल्लो समय ग्रामीण सडक जलविद्युत योजना निमार्ण गर्दा जताततै नदी बाह्र महिना नदी धमिलिन गई माछा र अन्य जलचर प्राणीले फुल पार्ने र सन्तान वृद्धि गर्ने समयमा दैनिक जसो नदी, खोला, तालमा पासो हालेर, करेन्ट लगाएर, विष हालेर, जाल हानेर माछा लगायतका जलचर प्राणी नष्ट काम भइरहेको छ । साँच्चै हामीले बाँझो, छोडेको जमिन, पर्ती, बाढी पहिरोग्रस्त, भिरालो जमिनमा लाभदायक रूख–बिरुवा रोप्न सकिन्छ । प्रकोप व्यवस्थापन गर्न बिमा नीतिहरू तय गर्न सकिन्छ । वर्षाको पानी सङ्कलन, मुहानको भरपुर संरक्षण, पर्यावरणीय सरसफाइ, डढेलो नियन्त्रण, वन क्षयीकरणमा रोक, नदी किनारामा बस्ती विकासमा रोक, फोहोर मैलालाई स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दा जल प्रदूषण कमी ल्याई जलचर प्राणीको जैविक विविधता संरक्षण हुनेछ ।
जस कारण जलचर प्राणीको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । जलचर प्राणीको भविष्य साग हामी सबैको भविष्य गाँसिएको छ । त्यस कारण हामी सबै यसको रक्षाको निम्ति लाग्नु आवश्यक छ । हामी सबैले हाम्रो जलचर प्राणीको माया गरेर यसको संरक्षणको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने यसको संरक्षण हुने छ ।
लेखक- माधव ढकाल
वातावरण संयोजक वातावरण संरक्षण परियोजनामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।